Hlola iMelbourne, e-Australia - World Tourism Portal
Hlola iMelbourne, e-Australia
Okufanele ukwenze eMelbourne, e-Australia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eMelbourne
Bukela ividiyo emayelana neMelbourne
Hlola iMelbourne ekhanda lePort Phillip Bay, AustraliaIdolobha lesibili ngobukhulu kanye nenhloko-dolobha yesifundazwe saseNingizimu ne-mpumalanga yeVictoria. Isebenza njengenhloko-dolobha yezamasiko yase-Australia engaphikisiwe, iMelbourne igcwele ukwakhiwa kwenkathi yeVictorian, izindawo zokudlela ezinhle, izindawo zokudlela ezinhle, izindawo zokudla ezinkulu, iminyuziyamu enkulu, iminyuziyamu, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, namapaki amakhulu nezingadi. Izakhamuzi zayo ezicishe zibe yizigidi eziyi-5 zombili zinamasiko nezemidlalo, futhi idolobha linemikhosi unyaka wonke, imicimbi yezemidlalo kanye namasiko amahle kakhulu e-Australia.
IMelbourne idume njengedolobha elisingatha imicimbi ehlukahlukene yezemidlalo yaphesheya kwezilwandle ezifana ne-Australia Open, Melbourne Cup Carnival neFomula 1 Grand Prix. Ibuye ibe neminye yemicimbi yobuciko edumile emhlabeni wonke kanye neminyuziyamu (Igalari Yesizwe yaseVictoria, iMelbourne Museum) kanye nemikhosi yezwe yamazwe omhlaba (Melbourne International Comedy festival, Melbourne International Film Festival, Melbourne Fringe Festival). Idolobha liphinde limelelwe ngobuciko basemgwaqweni abadume umhlaba wonke, isiko lekhofi, izinkampani nomculo obukhoma… iningi lazo elingatholakali ligijinyiswa yinani elikhulu lemigwaqo ehamba phambili. Okuvame ukuqanjwa ngegama njengeDolobha Elidume Kakhulu Emhlabeni, iMelbourne isondele futhi inezingadi eziningi, amapaki ezwe nezindawo ezihlala ekhaya kwezinye zezilwane zasendle zase-Australia (The Great Ocean Road, Grampians National Park, Phillip Island, neRoyal Botanic Gardens). Izindawo zendabuko, iminyuziyamu kanye namava (Koorie Heritage Trust, Birrarung Marr, Bunjilaka Aboriginal Cultural Center) kugcina ukuxhumana okubalulekile kubantu kanye nesiko leZizwe Zokuqala.
Izindawo zokudlela ezinkulu ezingenakubalwa, amathilomu, izindawo zokudla kanye namakilabhu amaningi edolobheni, kuvame ukufihlwa igridi yayo edumile yamagugu afakwe kuhlu nemigwaqo emigwaqo egcwele umgwaqo. Isikhungo saseMelbourne siyashaqeka ngokuphila, sibonisa ukuziqhenya kwabahlali ngokuthola kwabo njalo “idolobha elivuneka kakhulu emhlabeni”.
Ukuzilibazisa, (kufaka phakathi ubuciko obuhle kakhulu nemidlalo yemidlalo yaseshashalazini, i-ballet, i-opera, nokuningi), indawo yokudlela enhle, kanye namakhekhe angabizi kakhulu neCrown Casino nenkundla yokuzijabulisa. Uhambo lomfula lusuka eSouthbank.
Ifaka imakethe yezobuciko edumile yangeSonto eceleni kwe-Esplanade, nekhaya emahostela amaningi asemuva ebekiwe nezindawo zokudlela ezinhle. Kubuye futhi kufakwe iLuna Park, iPalais Theatre neSt Kilda Sea Bath.
Kubandakanya amachweba amadala aseMelbourne, kanye nomlando uClarendon Street kanye nesikhungo sedolobha. Ikhaya le-F1 Grand Prix yesifunda saseMelbourne elizungeze i-Albert Park Lake. Ifaka iSouth Melbourne Market (1867), enokunye okudumile kweDim Sims (okusunguliwe kweMelbourne).
IParkville idume njengesifunda saseyunivesithi, kanti uCarlton waziwa kakhulu ngeLygon Street, owaziwa umhlaba wonke ngesiko lakhe langempela lase-Italy kanye nokudla okwenziwa e-Italy. IParkville inezici zaseMelbourne Zoo nezingadi eziningi nezindawo ezinamaqabunga, uma kuqhathaniswa nemisindo ephakeme yamandla e-hipster mecca yaseBrunswick.
I-Working-class ne-Bohemian quarter, enama-boutiques amaningi athambekele, ezinye zezindawo zokudla ezihamba phambili zaseMelbourne - ikakhulukazi iVietnam - kanye nohlu olumangazayo lwamashicileli angaphakathi wedolobha agcwele ubuntu. Ezinye izikhungo ze-hipster zaseMelbourne ezinamakhono amaningi okuqamba kanye namasiko ahlukahlukene, egxile kakhulu eBrunswick St (Fitzroy), Gertrude St (Fitzroy / Collingwood), Smith St (Collingwood), Johnson St (Fitzroy / Collingwood / Abbotsford), uVictoria St (Abbotsford / IRichmond), iBridge Rd (iRichmond) neSwan St (iRichmond).
I-Footscray iyinhlangano yokuphelelwa amandla ngezikhathi ezithile, isizinda sendawo yokusebenza esine-vibe epholile nenamasiko amaningi. Inezimakethe ezishibhile, inqwaba yezitolo zaseVietnam nezaseMpumalanga Afrika. I-Yarraville iyindawo engaphansi komgwaqo enezakhiwo ezigcinwe kahle zeVictorian kanye ne-funky, ubuciko obunobuciko obuhlanganisa i-Theatre edumile.
IMelbourne idume ngokwazi ukukhombisa 'izinkathi ezine ngosuku olulodwa' futhi inesimo sezulu esishisayo esinezikhathi ezihlukile futhi ngokuvamile sinesimo sezulu esipholile.
Isizwe se-Kulin (njengoba saziwa kubantu beZizwe Zokuqala) sikhona eMelbourne yanamuhla ngeminyaka eyi-60,000-100,000. Le ndawo isakhiwe ngabantu abahlanu bokuqala beSizwe ngokuqhubeka kusukela manje, njengoba kunamasiko ahlukile anjengeTanderrum asekhona kuze kube namuhla.
IMelbourne ivame ukubizwa ngokuthi inhloko-dolobha yamasiko ye e-Australia, ngemibukiso yayo eminingi yobuciko, imikhosi yamafilimu, ama-orchestras, ukukhiqizwa kwe-choral ne-opera, umcimbi omnandi womculo obukhoma, kanye nokudla okuqinile, kwewayini ne-coffee culture. Abantu baseMelbourne bavame ukugqoka okungaphezu koku Sydney, ngokwengxenye ngenxa yesimo sezulu esibanda kakhulu. Amabha amaningi neziklabhu zinezimiso eziqinile zokugqoka, njengokudinga ama-collars nezicathulo zokugqoka zabesilisa.
Imicimbi ebaluleke kakhulu okufanele uyiqaphele ifaka phakathi iMelbourne International Film Festival ngo-Agasti, Melbourne International Arts festival ngo-Okthoba, kanye neMelbourne Comedy Festival ngo-Ephreli. Kunamakhonsathi nemibukiso eminingi unyaka wonke. Ngaphezu kweMelbourne Museum, kuneminyuziyamu ekhethekile enikezwe izifundo ezifana nesayensi, ukufuduka, umlando waseChina, umlando wamaJuda, ezemidlalo, umjaho, ifilimu nezithombe ezihambayo, ujantshi, amaphoyisa, ama-brigade omlilo kanye nasebhange.
Ezemidlalo zibaluleke kakhulu kusiko lase-Australia kanti iMelbourne iyidolobha lezemidlalo lase-Australia elingathandabuzekiyo. Ukuphathwa kwemidlalo emibili emikhulu kusekela ukusebenza kwabo eMelbourne: Cricket Australia kanye ne-Australia Champions League (AFL). IMelbourne Sports Precinct iyindawo yokuhamba ngomzuzu ka-15 ukusuka e-CBD futhi ifaka iMelbourne Park, i-AAMI Park kanye nomhlaba odumile we-Melbourne Cricket Ground (MCG), okuheha izivakashi ezinkundleni eziphezulu zomhlaba ze-10 ezinabantu abaningi abadlula abantu be-100,000. Leli dolobha liphinde libe nezinye izindawo eziningi zemidlalo ezidonsela izixuku ezinkulu nabasekeli abanomdlandla unyaka nonyaka.
Ikhilikithi futhi iyikhadi elikhulu lokudweba ngesikhathi sasehlobo, kanti iMelbourne Cricket Ground (i- 'MCG') ingesinye sezizathu ezidumile kakhulu zekhilikithi emhlabeni. UMnyuziyamu weNational Sports Museum (NSM) (kufaka uMnyuziyamu woMjaho) -iyimyuziyam eyizinikele yezemidlalo e-Australia kuphela - nayo ikhona e-MCG. Umdlalo we-One Day Test (waminyaka yonke) nochungechunge lwe-The Ashes (quadrennial) iyimicimbi ethandwa kakhulu futhi evame ukusingathwa eMCG, ngezixuku zivame ukudlula izibukeli ze90,000.
Ukugijimisana kwamahhashi ngomunye umcimbi obalulekile wezemidlalo, kanye ne-Spring racing Carnival egijima phakathi kwesizini ye-AFL neCricket kusuka ngo-Okthoba kuze kube nguNovemba. I-carnival isebenzisa izifundo zomjaho weFlemington neCaulfield futhi ifaka izinhlanga ezidumile zomhlaba, ikakhulukazi iMelbourne Cup. Iningi lombuso linamaholide omphakathi ngolweSibili lwangoNovemba njengoba usuku lomjaho weMelbourne Cup, kanti eminye imicimbi yomjaho wamahhashi emcimbini wethala, njengeDerby Day ne-Oaks Day, ihlangana ukudonsela izixuku okweqile kwe-400,000 minyaka yonke.
Njalo ngoJanuwari, iMelbourne ibamba i-Australia Open, omunye wemidlalo emine yomhlaba wonke ye-Grand Slam Tennis edlalwa enkantolo enzima. Kungumcimbi wezemidlalo omkhulu owenziwa minyaka yonke eningizimu hemisphere enabantu abaphezulu kakhulu be-700,000 futhi ngaphezulu kwe- $ 55,000,000 ngemali yomklomelo.
UMelbourne usingethe umjaho wokuqala wesizini yeFomula One, iFomula One Grand Prix kusukela nge1996. Umjaho ubanjelwe ezungeze i-Albert Park Lake eSouth Melbourne futhi udonsa ngokweqile kwabangenayo be-90,000 ngosuku olukhulu lomjaho.
IMelbourne inezilwane zasendle ngaphakathi nangaphandle kwedolobha, futhi iyisango eliya eVictoria: Isifundazwe sase-Australia esihlukahlukene kakhulu se-bio. IVictoria inezinhlobo zezinyoni ze-516 eziqoshwe - i-54% yezinyoni zase-Australia endaweni eyi-3% yendawo yomhlaba yase-Australia.
Amapaki nokugcina ngaphandle kweMelbourne anokuningi ukunikela ngomdlandla wezilwane zasendle. IMpumalanga yeMelbourne imvamisa ihlathi elimanzi, elimanzi - ikhaya leSuperb Lyrebirds, iKing Parrots, iWombats & Wallabies. I-Far East Gippsland ibuye ibe nendawo enhle engasogwini kanye namahlathi ezintaba anePlatypus, Goannas, Greater Glider and Dingoes zasendle (kodwa kufanele uphume ebusuku uzobabona). INtshonalanga yeMelbourne ihlane kakhulu ngamathafa avulekileyo - namakhaya ama-koalas, i-Eastern Grey Kangaroos, i-Kookaburras ne-Cockatoos. Inyakatho-nentshonalanga ekude kakhulu - iMallee - yome kakhulu, yaziwa ngeMalleefowl, iMajor Mitchells Cockatoos, amaRegent Parrots, ama-Emus nokuphindaphinda okuningi.
IMelbourne ihanjiswa yizikhumulo zezindiza ezimbili eziyinhloko -
Isikhumulo Sezindiza saseMelbourne, esibizwa nangokuthi yi-Tullamarine Airport, sitholakala enyakatho-ntshonalanga yedolobha futhi siyisizinda esikhulu sezwe lonke kanye nasekhaya.
Ezinye izindiza ezifuywayo zibuye zisebenzise i-Avalon Airport, etholakala eningizimu-ntshonalanga enkabeni yedolobha esendleleni eya eGeelong.
IMelbourne inethiwekhi enhle kakhulu yezindlela zebhayisekili, kanye nendawo evamile eyisicaba, okwenza amandla e-pedal indlela enhle yokuthatha idolobha. Izindlela eziningi "zisetshenziswana ngezinyawo" ngaphansi komthetho, yize iningi labasebenzisi ezindaweni eziningi lingabahamba ngamabhayisekili. Lokhu kusho ukuthi abahamba ngamabhayisekili kufanele balindele ukuthi bahlanganyele indlela nabahamba ngezinyawo, abagibela izinja, ama-rollerbladers, ama-jogger, ama-prams kanye nama-triking. Eminye imigudu iqukethe izingxenye zomgwaqo (emigwaqweni emakwe ngebhayisekili). Kungumthetho ukujikeleza ezindleleni kuphela lapho kugada izingane ngamabhayisekili noma lapho umgwaqo umakiwe noma usayiniwe njengokuvumela amabhayisekili. Izigqoko zomzimba zidingwa ngumthetho, futhi ukunakekelwa kufanele kuthathwe lapho uhamba ngamabhayisekili asondelene namathrekhi tram, lapho abaningi baye balimala khona esikhathini esidlule. Izingubo zokukhanyisa nezibani kubalulekile ekugibeleni ebusuku okuphephile.
Amaketanga amakhulu okuqashwa kwezimoto amelwe kahle futhi afaka iRedspot, i-Avis, iBhajethi, i-Europcar, i-melbourne Hertz, iTrifty. Izinkampani zokuqasha izimoto ezizimele nazo ziningi futhi zinganikeza inani elihle ngemali. Uma ufuna ukumboza ibanga elide ngemoto, qiniseka ukuthi inqubomgomo yakho yokuqasha ifaka imayela elingakhawulelwe - umnotho omningi wokuqashwa kwezimoto ojwayelekile ufaka lokhu esele.
ICity Center, kufaka phakathi iSouthbank kanye neDocklands kuningi okuheha abahambi, okubandakanya izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, imidwebo yobuciko, izindawo zokudlela, izindawo zokuphumula umculo omningi, amakilabhu nemigoqo, izitolo zomnyango kanye nobuciko bokwakha obuthokozisayo. Okuhehayo okwaziwa kakhulu eMelbourne, okuphawuleka kakhulu:
Isiteshi sesitimela saseFlinders Street
I-Queen Victoria Market
Igalari Yesizwe YaseVictoria
ILabhulali Yezwe YaseVictoria
I-Old Melbourne Gaol
I-Melbourne Cricket Ground (MCG)
ISouth Gate kanye ne-Precinct yezobuciko
I-Coops Shot tower
Isikhungo Sembukiso saseMelbourne
I-Inner North ihlanganisa iCarlton, iParkville, iNorth Melbourne neBrunswick. Lesi sifunda saziwa ngezingadi, imiphakathi efudukayo kanye nobunjiniyela bezomlando.
IMelbourne Museum ne-IMAX
Umphakathi wase-Italy (Imigwaqo yaseLygon neRathdowne)
Isakhiwo Sembukiso WaseRoyal
ISt Kilda Pier
ISt Kilda Esplanade
Izingadi zase-St Kilda Botanical
Umnyuziyamu wamaJuda wase Australia
IMakethe yaseNingizimu Melbourne (kufaka phakathi ama-sim adumile)
Ibhishi laseNingizimu Melbourne
IClarendon Street (Umgwaqo Omkhulu onezindawo zokudlela / Amakhekhe / ama-Pubs)
IPort Melbourne Pier (Isikhumulo Semikhumbi Esihamba Ngayo)
Ebhishi lase-Port Melbourne
IBrunswick St (i-cafe / i-bar strip ende ende nethandekayo enokudla okushibhile futhi okuhle)
UJohnston St (ikhaya lomphakathi wasendaweni waseSpanic futhi unezindawo eziningi zokudlela, imigoqo kanye nezincwadi zokudla, kanye neTote Hotel neBusuku Cat edume kakhulu nge-disco yasebusuku kakhulu)
IGertrude St (umgwaqo omuhle, onamakheli amaningi, imigoqo, izindawo zokudlela eziphakeme nezingubo ezihlukile, kanye nomkhosi wokuqagela ebusuku wobusuku)
USmith St (umgwaqo ogijimayo omncane kodwa onamasiko onamakhofi, imigoqo ye-dive, ilogo yama-cocktail kanye nenani elikhulayo lezindawo zokudlela ezibhekwa kakhulu.
I-Carlton United, i-Mountain Goat neMoney Dog Breweries
Ama-Pubs agxiliswe ngaphakathi nasezindaweni ezizungeze iSonto, iVictoria neSwan St Stain, lapho kuthengwa khona izitolo
Bridge Road. Ungaphuthelwa yi-hipster-the band eguquliwe ye-Abbostford Convent neCollingwood Wezingane Farm eduze komgwaqo e-Abbotsford.
Greenery, ephakeme-ukuphela nokuthenga.
UMgwaqo weChapel kanye noMgwaqo weToorak (odume ngezitolo zemfashini, amathofi nezindawo zokudlela ezidonsela izivakashi nakwabendawo)
Izingadi ZaseRoyal Botanic
IPrahran Market iyimakethe enikezelwe ekudleni okusha okukhwalithi okusha
Umgwaqo Wezentengiselwano (waziwa ngezindawo zokudlela, izindawo zokudla nanjengesifunda samasiko esidala esivelele)
IBrighton yindawo enobungane emndenini.
I-Bay Street (enamakhofi amahle kakhulu we-upmarket nezitolo zokudlela ezinkulu)
Amabhokisi okugeza (iBlueon)
Bona amafilimu athokozisayo e-Art Deco-styled repertory cinema Astor Theatre eSt Kilda. Kunezinhlelo eziningana ze-cinema yenyanga ehlobo. IMelbourne International Film Festival ivulwa ngo-Agasti.
Ngokuhlukile, vakashela iCinema Nova kuLygon Street ngoMsombuluko ngamafilimu ngaphambi kwe-4PM.
IMelbourne yaziwa nangobuciko obukhulu basemgwaqweni obuvame ukutholakala ngaphansi kwemigwaqo emincane lobu buciko buboniswa ezindaweni ezingaphandle ezivunyiwe.
Funda ngesiko labomdabu nomlando ku-Koorie Heritage Trust
Bukela inqubo yokuhumusha yokwenza uswidi okunomuntu enziwe ngesandla e-Suga. Isikhathi sokudla kwasemini yisikhathi esihle sokubona (kanye nesampula!). Kukhona isitolo eQueen Victoria Market, kepha uma uvakashela indawo yaseRoyal Arcade, ungabuka futhi ushokoledi wenza umnyango olandelayo eKoko Black.
Bukela umdlalo webhola le-AFL eMCG noma e-Etihad Stadium phakathi nobusika, noma umdlalo weCricket phakathi nehlobo.
UKick ubuye kwenye yamakhofi amnandi aseMelbourne e-CBD (Degraves St, The Causeway, nakweminye imigwaqo egqamile), iSouth Yarra (Chapel Street) noma iFitzroy (Brunswick Street, Smith Street).
IMelbourne inezindawo zomculo obukhoma ogqamile. Amabha amaningi kanye nama-pubs kuzoba namakhophi omagazini wamahhala we- “Beat” ne- “Inpress” ahlinzeka ngemigca yamagig asendaweni. I-Fitzroy, iCollingwood neSt Kilda ngokuvamile ukubheja kwakho okuhle kakhulu ukubona ezinye zethalente lasendaweni elikhulu uMelbourne okufanele anikele ngalo. Izinkundla lapho ungahle uhambe khona zibandakanya: "AmaTote", "The Evelyn" no "The Espy".
IBlack Light Mini Golf itholakala eDocklands. Lesi yigalofu yegalufu ye-18 hole mini eyenzelwe eduze nengqikithi yase-Australia. Ingaphansi kokukhanya okumnyama nohlelo olukhanyayo nolomsindo futhi enemibala ye-fluorescent. Uma ungumdlalo, ungagibela futhi e-Coffin.
Ukukhuphuka kwetshe elingaphakathi nendawo ngombono. I-Hardrock esikuSwanston Street inodonga lokukhuphuka lwangaphakathi olulungele abaqalayo nabaqhamuka phambili.
hamba kitesurfing - I-West Beach, iSt Kilda.
IMelbourne yindawo enhle yokufunda amakhono akho wokuthwebula. Izindawo eziningi kakhulu zokuthatha isithombe esihle.
AbakwaBrewers Feast - Craft Beer & Ukudla Umkhosi, Abbotsford Convent St Heliers Street. I-Brewers Feast iyi-Craft Beer, Ukudla & ne-Cider festival. Umbukiso we-Craft Beers owuthandayo nama-Cider e-Australia kwisithonjana se-Abbotsford Convent. Ungaphuthelwa emcimbini wokuqala wobuciko bezikebhe zasehlobo! Jabulela ubhiya omkhulu nabangane abakhulu eGreater festival.
Amahora okuthenga kuMetro Melbourne ngokuvamile izinsuku ze-7 ngesonto, i-9AM-5: 30PM. Izikhungo eziningi zasemadolobheni ezinjengeChadstone zinamahora okuvala kamuva ngoLwesine nangoLwesihlanu - iningi lize lifike ku-9PM. Izitolo ezinkulu zengeze amahora we-7 izinsuku, iningi livula e-7AM futhi livale phakathi kwamabili noma i-1AM, noma kunjalo kunezitolo ezinkulu eziningi zehora le-24 ezungeze.
Utshwala eVictoria bungathengwa ezitolo / ezindaweni ezinamalayisense nasezitolo ezinkulu zivame ukuba nezitolo zamabhodlela ezihlanganayo, ezisondele ngaphambi kwamahora wesuphamakethe.
I-Arcade yomlando i-Arcade ku-Collins Street
ILittle Collins Street iyikhaya labanye abakhiqizi abaphambili bomhlaba nezindlu zemfashini; UCollins Street ubuye aziqhayise nangezinye izitolo eziphezulu njengeLouis Vuitton. IBrunswick Street (Fitzroy), kanye nesiphetho esiseningizimu yeSitalato iChapel ePrahran / Windsor, sinamaqoqo ezitolo athengisa ingxubevange ye-vlectage ye-eclectic, i-rave, i-retro kanye nezinye izinto ezifana neShag, Fat Helen's neBeaut Vintage ukuyothenga nxazonke.
IMelbourne Central kungenye yezitolo ezizinze edolobheni, eduze kwesiteshi esingaphansi komhlaba segama elifanayo.
IBourke Street Mall enomnyango igcina iMyer noDavid Jones ngenye yezindawo zokuthenga ezitolo edolobheni.
I-Emporium ixhumanisa iMyer noDavid Jones eMelbourne Central futhi inenqwaba yezimpawu zase-Australia naseMelika.
Kwisitolo sabathengisi bezentengiselwano, kunesikhungo iDFO Outlets Center etholakala eSouth Wharf, osebeni oluseningizimu yoMfula iYarra. Itholakala eduze kweCommon Center.
Kuyafaneleka futhi ukuphawula, kuma-Backpackers, ukuthi u-Elizabeth Street unezitolo eziningi ze-Bargain backpackers.
IBridge Bridge Road eRichmond umucu lapho kubuswa khona izindawo okugcinwa kuzo izinto zokugcina izimpahla futhi akekho okhokha intengo ethengiswayo.
I-Chapel Street eSouth Yarra iyintandokazi phakathi kwabantu bendawo, ngokusakazwa kwayo kwezindawo zokuphumula ezikhethekile, amathofi nezitolo ezidayisiwe ezenziwe kahle.
Kukhona futhi nezindawo ezinkulu ezinkulu zokuthenga ezindaweni ezingaphandle, njengeChadstone neSouthland (eCheltenham) eningizimu-East. Westfield Doncaster Shoppingtown. I-Eastland (iRingwood) neKnox City ziseMpumalanga engaphandle. INorthland enyakatho, Highpoint entshonalanga. IChadstone eMonash yisikhungo esikhulu kunazo zonke sezitolo eSouthern Hemisphere enezitolo ezingaphezu kwe-530.
Kulabo abasemakethe yabashadikazi, High Street e-Armadale, Stonnington kanye ne Sydney Umgwaqo eBrunswick, Moreland yizinhlobo ezimbili eziphambili zezingubo zomshado nezinye izinto. Kulabo abafuna indalo yasendaweni, abafisa ukuyidala, zama i-Greville Street eSouth Yarra, Stonnington noma kwaSmith Street nasezindaweni ezizungeze i-Fitzroy.
Ukuthenga izikhumbuzo ezihlekisayo nezinto ezisejwayelekile zase-Australia, hamba noma uthathe ithilamu uye eVictoria Market. Uzothola konke okudingayo lapho futhi intengo imvamisa iyisigamu noma ingxenye yesithathu yamanani ezitolo zezikhumbuzo ezisedolobheni.
Ukuthi udlani futhi uphuze eMelbourne
Ama-Payphone atholakala kalula edolobheni, kepha amaningi ayakhishwa ngenxa yobunikazi befoni obukhulayo. Lezi zingcingo zisebenza ngokubambisana noma zisebenzisa amakhadi wefoni akhokhelwa ngaphambili, atholakala ezitolo ezilula kakhulu noma izinto ezintsha. Amakhadi wokushayela amazwe omhlaba nawo ayatholakala kulezi zitolo.
Kudotshwa amakhofi e-intanethi kulo lonke idolobha, ikakhulukazi eduze kwendawo eboshwe emuva yeSt Kilda neFlinders Street. Ijubane livame ukuba lihle kakhulu.
IMelbourne ihlukaniswe phakathi kwamadolobha aphephe kakhulu e-10 emhlabeni yi-Safe Cities Index. Kungadonsa kwesinye isikhathi isithunzi esiphikisayo ngaphakathi kwe-Australia ngenxa yokushaywa kwabezindaba, kodwa-ke akunakwenzeka ukuthi izivakashi zihlangane nanoma yibuphi ubugebengu futhi kunconywa nezindlela zokuphepha ezijwayelekile.
IMelbourne inamaphoyisa aqinile, njengoba kwenza ingxenye yeVictoria. Amaphoyisa eMelbourne nakulo lonke elase-Australia asiza kakhulu, athembekile, ahlonipha futhi athembekile. Cishe amaphoyisa azokuphatha njalo ukuthi uwaphatha kanjani futhi uhlala ehloniphana ngazo zonke izikhathi kuyanconywa. Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthola isexwayiso ngecala elincane (esikhundleni senhlawulo) ngokukhombisa ukuzithoba nokuhlonipha Isikhulu. Ungalinge uzame ukufumbathisa iphoyisa laseMelbourne, noma lonke i-Australia.
Izindawo ongazibona ngaphakathi kokuhamba kwehora elilodwa enkabeni yeMelbourne.
I-Werribee - isiza esidumile somhlaba esibamba izinyoni, ukwakhiwa okungokomlando nezindawo ezivulekile zohlobo lwezilwane.
Dandenong Ranges - Ipaki kaZwelonke, izingadi, isitimela sesitimela esingumlando.
Ukunambitha iwayini e-Yarra Valley, Healesville kanye nase-Healesville Sangment.
Mount Donna Buang - iqhwa lokubona ubusika ebusika.
Mount Buller - ukushushuluza nokubona.
AmaVictoran Goldfields - iBandigo, iBallarat, iCarlimaine, iMaldon.
Ububanzi beMacedon neLive LaseSpain.
I-Geelong, i-You Yangs ne-Serendip Sancwele.
IGreat Ocean Road - enama-vistas amaningi amahle.
Ipaki Yesizwe YamaGrampian.